Ogaden News Agency (ONA) – Aqalka Sare oo Ka Walaacsan Xaalada Amni ee Muqdisho.
Aqalka Sare oo Ka Walaacsan Xaalada Amni ee Muqdisho.
Posted by ONA Admin	/ September 12, 2018
Kadib markii Isniintii weerar ismiidaamin ah lagu burburiyey gebi ahaan xaruntii degmada Hodan, ayaa waxaa isa soo taraya cabsida iyo walaaca laga muujinayo xaalada amni ee magaalada Muqdisho.
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ayaa furitaanka kalfadhigiisa dib loo dhigay sida lagu sheegay qoraal shalay kasoo baxay guddiga joogtada ah ee Aqalkaasi, iyagoo ku sababeeyey in arrintan la xidhiidho xaalada amni ee magaalada.
Waxay sidoo kale guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare sheegeen in meel xun ay mareyso khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya, iyagoo sheegay inay bilaabayaan dadaal ay doonayaan inay xal ugu raadiyaan arrimaha cakiran ee nidaamka Federaalka iyo xidhiidhka sii xumaanaya ee u dhaxeeya Xukuumada Federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah Federaalka.
Xubnaha dhaliilsan xukuumada Federaalka iyo qaabka ay u wajahday amniga caasimada ayaa sheegaya in ay salka ku hayso in gebi ahaan la burburiyey habkii ay ku shaqeyn jireen sirdoonka dowlada gaar ahaan hay’ada nabad sugida ee NISA, isla markaana laga garab dhisay ciidamo si gaar ah uga amar qaata xafiiska Raysalwasaare Xasan Cali Khayre, arrintaasi oo ay walaac weyn ka muujinayaan siyaasiyiinta mucaaridka ku ah xukuumada.